लामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि प्रयोग गर्नुस् निकै प्रभावकारी घरेलु औषधि !!जानी राखौ | Saajha Khabar
लामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि प्रयोग गर्नुस् निकै प्रभावकारी घरेलु औषधि !!जानी राखौ
Posted by Saajha Khabar On January 03, 20180Comment
एक सातापछि स्याउ र कागती दुवैबाट ल्वाङलाई निकाल्नुहोस् । यसरी निकालिएको ल्वाङलाई काँचको फरक-फरक सिसीमा हालेर राख्नुहोस् । अब यसरी तयार भएको ल्वाङ दैनिक दुईवटाको दरले खानुपर्छ । पहिलो दिन कागतीबाट निकालिएको दुई ल्वाङ मसिनो बनाएर पिस्नुहोस्, अब यसलाई बाख्राको दूधमा मिसाएर पिउनुस् । यदि बाख्राको दूध पाइन्न भने गाईको शुद्ध घिउ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । फेरि अर्को दिन स्वाउबाट निकालेको दुई ल्वाङलाई पिसेर त्यसैगरी खानुहोस् ।
यसरी दैनिक पालैसँग फरक-फरक सिसीको ल्वाङ दुई/दुईवटाको ४० दिनसम्म खाँदा तपाईंका अधिकांश यौन समस्या समाधान हुनेछन् । साथै यौन क्षमता पनि दोब्बर हुनेछ । यो निकै नै प्रभावकारी आयूर्वेदिक औषधि प्रयोगमा नियमितता चाहिन्छ । नियमितताले नै यसलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सघाउँछ । एजेन्सीको सहयोगमालामो समय सम्म यौन सम्पर्क गर्नको लागि प्रयोग गर्नुस् निकै प्रभावकारी घरेलु औषधि !!जानी राखौ
यसरी दैनिक पालैसँग फरक-फरक सिसीको ल्वाङ दुई/दुईवटाको ४० दिनसम्म खाँदा तपाईंका अधिकांश यौन समस्या समाधान हुनेछन् । साथै यौन क्षमता पनि दोब्बर हुनेछ । यो निकै नै प्रभावकारी आयूर्वेदिक औषधि प्रयोगमा नियमितता चाहिन्छ । नियमितताले नै यसलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सघाउँछ । एजेन्सीको सहयोगमा
Previous: पन्ध्र फोटोमा हेर्नुस् त्रिचन्द्र सामुन्नेको सडक रणभूमि बनेको क्षण
Next: खोटांगको हलेसी बजारमा भिषण आगोलागी करिब पाँच घण्टा पछि नियन्त्रण।